Hantida laga soo saaray dib-u-cusbooneysiintu miyey muhiim u tahay wax-soo-saarka gudaha Spain? | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomàs Bigordà | | Biyomareenka, Awoodda dabaysha, tamarta Haydarooliga, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Nasiib wanaag, sanadkii hore, iyo sanadkii labaad oo isku xigta, tamarta cagaaran waxay kordhisay waxtarkooda dhaqaalaha qaranka iyo way jareen gaar ahaan qiimaha suuqa korontada.
Nasiib darro, iyo sida looga faallooday boggan, ayaa halaag shaqaalaynta qaybta, waxay sheegatay in ka badan 2.700 oo shaqo.
1 Shaqada Spain
2 Wax soo saarka gudaha Spain
3 Keydinta 'Cagaar' ee suuqa korontada
Tikniyoolajiyadda, kuwii abuuray shaqaalaynta ugu badan ee 2016 waxay ahaayeen dabayl (535), qorraxda sawir qaade (182), tamarta korantada cadceedda (76), heer kul hoose oo enthalpy (19), badda (17) iyo xoog dabaysha (15) shan iyo toban) Si kastaba ha noqotee, inta badan shaqooyinka waaxdu waxay ku urursan yihiin jiilka tamarta biomass. Waxaa ku xigta dabayl, oo leh 17.100, iyo sawir qorrax leh, oo leh 9.900, sida ku cad xogta ay bixisay Irena (Hay'adda Caalamiga ah ee Cusboonaysiinta Tamarta).
Dunida inteeda kale, qorraxda 'photovoltaic' waa tan waa madaxa, iyadoo la shaqaalaysiinayo 2,8 milyan oo qof, taas oo ka dhigan 11% dhammaan shaqooyinka ay soo saaraan dib-u-cusboonaysiinta. Rakibaadda dabaysha ayaa raacda, oo leh 1,1 milyan oo shaqo.
Irena waxay hadaf ka dhigatay inay u hogaansanaato siyaasadaha isbadalka cimilada marka la gaaro 2030 hirgalinta cusboonaysiinta adduunka ayaa laba jibaari doonta. Taasi waxay, marka la xisaabiyo, ka dhigi doonta 24 milyan oo qof shaqaalayn kara qaybtan markaa kadib.
Sida laga soo xigtay Irena, oo adeegsata Ururka Iskaashatooyinka Shirkadaha Tamarta Cusboonaysiinta (APPA), qaybtani waxay ka timaadaa wax baabi'inaya shaqaalaynta ilaa 2008, markii cusboonaysiinta loo shaqaaleeyay ilaa 150000 oo qof, sanadkaas ayaa tirada ugu badan laga diiwaan geliyey dalkeenna.
Irena waxay ku eedeyneysaa xaaladan "siyaasadaha xun ee qaybta korontada«, Taas oo keenta in tirada shaqaalaha ee dabaysha, qorraxda iyo biomass ay sii socoto inay hoos u dhacdo.
Wax soo saarka gudaha Spain
Kadib sanado hoos udhac ah, waxaad moodaa in ilaha tamarta la cusboonaysiin karo ay bilaabaan inay si tartiib tartiib ah u koraan, culeyskooda dhanka dhaqaalaha dalkeena. Sida laga soo xigtay Daraasadii ugu dambeysay ee Saameynta Dhaqaalaha ee Dhaqaalaha Cusbooneysiinta ee Isbaanishka oo ay diyaariso sanad walba Ururka Iskaashatooyinka Tamarta Cusboonaysiinta (APPA), sanadkii 2016-kii waaxda ayaa ku biirisay 8.511 milyan oo Yuuroo GDP, taasoo matalaysa 0,76% wadarta iyo kororka 3,3 % marka loo eego sanadkii ka horeeyay.
Tikniyoolajiyadda, mida ugu badan ee soo kordhisay waxay ahayd qorraxda sawir qaadista (32,37%), waxaa ku xigay dabayl (22,38%) iyo tamarta korantada (16,45%). Intaa waxaa dheer, waxay ku dartay 1.000 milyan oo gudaha cashuurta net iyo dheelitirka saafiga ah ee dhoofinta ee 2.793 milyan oo kale ayaa la duubay.
Sababaha koritaankan waa in laga helaa kororka waxqabadka ee warshadan, taas oo badanaa sabab u ahayd xaraashka dabaysha (500 MW) iyo bayoolaji (200 MW) iyo ku dhawaaqida dalabyada cusub ee horay loo sameeyay 2017 oo saamayntoodu, iyadoo la hubo, ay ka muuqan doonto warbixinta sanadka dambe.
In kasta oo xogtan wanaagsan (oo aad uga fog waxtarka ugu badan ee waxsoosaarka guud ee 2012 -10.641 milyan, 1% wadarta guud), ururku wuxuu rabay curyaannimo muuji in tamarta la cusboonaysiin karo ay ku noolyihiin Isbaanish, maaddaama dhammaan 2016 kaliya 43 MW oo awood cusub oo la rakibay lagu daray, tirada ugu yar haddii aan barbar dhigno dalalka kale isla muddadaas.
Keydinta 'Cagaar' ee suuqa korontada
Marka laga reebo saameyntooda heerka dhaqaalaha, ilo nadiif ah ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay mustaqbalka suuqa korantada ee waddankeenna 2016. Waad ku mahadsan tahay iyaga, qiimaha saacad kasta oo megawatt ah (MWh) oo la soo iibsaday ayaa hoos u dhacday 21,5 euro, taas oo ugu dambeyntii wuxuu istaagay 39,67. Sida laga soo xigtay daraasaddan, dabaysha, qorraxda ama korontada la'aanteed, MWh kasta waxay ku kici lahayd 61,17 euro, sidaa darteed joogitaankooda isku-darka wuxuu matalayay wadarta keydka 5.370 milyan sanadka oo dhan. Tiro ka sii muhiimsan
Dhinaca kale, dib-u-cusboonaysiinta ayaa horjoogsatay soo dejinta ku dhowaad 20.000 oo tan oo saliid ah, taas oo ka hortagtay in la bixiyo 5.989 milyan oo yuuro oo kale, waxayna ka hortagtay 52,2 milyan oo tan oo ah CO2 waxay wasakheysaa jawigayaga, taasoo sidoo kale horseeday in la badbaadiyo 279 milyan oo xuquuqda qiiqa.
Waxaan rajeyneynaa in 3-da ugu dambeysa ee xaraashka ah ee gobolka, culeyska cusbooneysiinta ee GDP uu kordhi doono, wax badanna inta lagu jiro 2 ama 3 sano ee soo socota.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Hantida laga soo saaray dib-u-cusbooneysiintu miyey muhiim u tahay wax-soo-saarka gudaha Spain?
Waa maxay awoodda korontadu?